China ịghasa Type apịtị valvụ maka API6A Standard ụlọ ọrụ na-emepụta | Cepai
Standard Mud valves dị na API 6A 21th mbipụta ọhụrụ, ma jiri ihe ndị kwesịrị ekwesị maka ọrụ H2S dịka ọkọlọtọ NACE MR0175.
ECPAI's Mud valves, A pụrụ ịdabere na imewe maka rigorous oké ọrụ ọrụ na abrasive ọnọdụ na kpọmkwem engineered maka siri ike chọrọ nke oilfield ọrụ, anyị imewe maka apịtị valvụ nwere adụ akara na metal ka metal akara owuwu, abụọ ịghasa mbanye, ngwa ngwa na-emeghe na nso, a pụrụ ịdabere na akara na-eme ka ogologo ọrụ ndụ, na boneeti nwere ike wepụrụ mfe elele trims karịa ikewapụ akụkụ niile nke valvụ ahụ. Ọ bụ njikọ CEPAI nwere Flange, n'otu, ịghasa na ịgbado ọkụ ụdị.
◆ High nsogbu inggwakọta ahịrị
◆ High-egwu mkpọpu ala usoro valves
Ol Mmepụta ihe ngosipụta • Ihe ejikere Standpipe
Production nzukọ usoro • mgbapụta Manifold block valves
Aha Mbat Valve
.Dị Flange Type Mbat valvụ / Union Type Mbat valvụ / ịgbado ọkụ Type Mbat valvụ / ịghasa Type Mbat valvụ
Nrụgide 2000PSI ～ 7500PSI
Dayameta 2 "～ 5" (46mm ～ 230mm)
Na-ese n'elu mmiri slab gat e imewe
Ọnụ ụzọ mbadamba ọnụ na oghere njikọ “T” na-enye ohere ka ọnụ ụzọ ámá ahụ gbagoo n’elu oche na-enye akara akacha adaba.
In-line ubi idozi ikike
A na-ewepụ ihe mkpuchi ahụ maka nyocha nke akụkụ dị n'ime na / ma ọ bụ dochie ya na-ewepụghị valvụ ahụ na akara ahụ. Ihe ngosi a na-enye ikike ngwa ngwa na ọrụ dị mfe na-enweghị mkpa ngwaọrụ pụrụ iche.
Oké ọrụ ala biarin
Nnukwu, nnukwu ọrụ azuokokoosisi bekee na-ebelata torque.Unique, abrasion na-eguzogide, otu ibe oche imewe.
Mgbakọ oche ahụ nwere ihe ntinye abụọ / nchara igwe anaghị agba nchara nke elastomer na-agbanwe agbanwe na-adịgide adịgide.
Elastomer na-emechi emechi mgbe ọ jesịrị ya na ọrụ abrasive. Ngwongwo igwe anaghị agba nchara bụ corrosion na mbuze na-eguzogide ọgwụ. Ezubere mgbaaka ndị ahụ iji hụ na ike kachasị njikọta maka elastomer. Otu imewe imewe na-eme ka ubi nnọchi mfe.
A na-eji igwe “mkpọchi shei” ejiri oche oche nke na-ejigide oche dị na valvụ ahụ. Nke a imewe ana achi achi ezi oche itinye n'ọnọdụ na kacha nta iguzogide igba.
Isi ihe yiri mgbaaka
Elu siri ike alloy ahụ na-eyi mgbanaka azụ n'akụkụ abụọ nke oche ahụ. Ihe mgbanaka ndị a na-agbatị ndụ ọrụ nke valvụ ahụ site na ịmịcha akwa nke nwere ike imebi ahụ gburugburu ebe a na-anọ oche.
Rising azuokokoosisi imewe
DM 7500 na-eji usoro mgbatị na-arị elu nke na-ewepụ ma na-echebe eri site na usoro akara ahụ. Mgbatị na-ebili na-egosikwa ọnọdụ ọnụ ụzọ.
Anya oghere ọnọdụ anya
Anya nlele ọnọdụ doro anya na-enye onye ọrụ ohere ịchọpụta nke ọma ma valvụ ahụ mepere ma ọ bụ mechie. Igwe ihe ngosi na-enye aka ichebe eriri azuokoo ihu igwe.
Replaceable azuokokoosisi mbukota
Enwere ike dochie ngwugwu azuokpu na-ewepu bonnet site na valvụ (3 "- 6") na-echekwa oge mgbe enwere ike ịchọrọ mmezi a (rịba ama: a ga-ewepụ akara na akara nrụgide tupu ịme mmezi a)
Uwe a kpochara
Ezubere mpaghara oghere ahụ iji kwe ka "iwepụ" na-aga n'ihu site na mmiri mmiri. Omume a na - egbochi valvụ site na "sanding", ọbụlagodi na nrụnye standpipe.
Nke gara aga: Hydraulic Arụ Ọrụ Ọnụ Gatezọ Gatemá Valve
Osote: Mpempe abụọ na-agbazi valvụ na-ese n'elu mmiri
Ọnụ Gatezọ Mudmá mud
Mbupu Ọnụ ụzọ ámá valvụ Manufacturers